July 10, 2021 8603
बिहीवार साँझ आफू बस्ने अपार्ट`मेन्टमा मृ त फेला परेकी अभि`नेत्री जेनी कुँवरको अन्त्ये|ष्टि गरिएको छ । उनको शुक्र`वार दिउँसो पशुपति आर्यघा`टमा अन्त्ये`ष्टि गरिएको हो ।
काठमाडौंको टिचिङ अस्प`तालमा पो`स्टमा`र्टमपछि अन्तिम श्रद्धा|ञ्जलीका लागि उनको पार्थिव श`रीर पशुपति आ`र्यघाटमा राखि`एको थियो । उनलाई श्र`द्धाञ्जली अर्पण गर्न फिल्म क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरु पुगेका थिए ।
श्रीमान|सँग काठमाडौंको थापागाउँस्थित सन|राइज सिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएकी जेनीका दुई छोरी छन् र दुवै देश`बाहिर छन् । भान्सा कोठामा देह`त्याग गर्नु`अघि लेखेको सु’सा’इ’ड नो’ट प्र`हरीले भेटाएको छ । जसमा उनले आफ्नो मृ त्युको दोषी कोही नभएको उल्लेख गरेकी छन् । उनी विगत एक वर्षदेखि डि’प्रे’स’नमा थिइन् ।
प्रहरीका अनुसार उनले नोटमा लेखेकी छन्, ‘मेरो दिमागी हालत ठिक नभएर मैले सु’सा’इ’ड गरेको हो । मलाई मेरो श्रीमान र छोरीहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ । यसमा कसैको दोष छैन ।
बिरामी ठिक होला भनेको झनझन् गाह्रो हुँदै गयो, त्यही भएर देहत्याग गरेकी हुँ ।’ प्रहरीले उक्त स नोटको परी`क्षण गर्न सामाखुसीस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोग`शालामा पठाएको छ ।
‘घायल र हलचल’ नामक दुई फिल्मको निर्माण समेत गरेकी जेनीले फिल्म ‘जिन्दगानी’ बाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी थिइन् । यसपछि उनले ‘मैदान, जीननदाता, कानून, अभिमन्यू, मलाई माफ गरिदेऊ’ लगायत थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरिन् ।
पछिल्लो समय भने उनी अभिनय`बाट निस्क्रिय जस्तै थिइनन् । तर, स्थिति सा`मान्य भएपछि नयाँ फिल्म निर्माण गर्ने उनको तयारी थियो ।
Prevखो`प लगाउनुहोस्, एउटा कार उपहार लिएर जानुहोस् ! यो देशले गर्यो अचम्मको अफर
Nextआहा ! नेपाली संस्कारमै यसरी गरियो अमेरि`कन बेहुला र नेपाली छोरिको बिवाह (हेर्नु`स् भिडियो )
गायिकालाई क्षति`पूर्ति दिलाउनका लागि पलको खातामा रहेको २० लाख रोक्का गर्न वकिलको माग
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132818)